warkii.com » RASMI: Courtois iyo Benzema Oo La Guddoonsiiyey Abaal-marinta Xiddiga Bisha & Labada Bilood Ee Hal Mar La Is Raaciyey
RASMI: Courtois iyo Benzema Oo La Guddoonsiiyey Abaal-marinta Xiddiga Bisha & Labada Bilood Ee Hal Mar La Is Raaciyey
Weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha June, kaddib markii uu shan gool u dhaliyey kooxdiisa, kaan caawiyey inay kulamo adag kasoo helaan dhibcaha.
Los Blancos ayaa dhamaan kulamadii bishii June iyo July soo guuleysatay, waxaanay ahaayeen toban kulan oo waqti kooban u dhexeeyey oo Los Blancos ka caawiyey inay horyaalka waddanka Spain ee LaLiga kaga guuleysato Barcelona.
Benzema oo shan gool oo saddex ka mid ah uu ka dhaliyey Valencia iyo Real Sociedad, ayaa waxa kale oo u dheeraa gool caawintii cajiibka ahayd ee uu cidhibta ugu dhiibay Casemiro kulankii Espanyol iyo sidii uu qaybta uga qaatay guushii Eibar.
Dhinaca kale, Courtois oo ah goolhayahay shabaqiisu ugu nafiidta badan yahay xili ciyaareedkan dhamaan 20ka kooxood ee LaLiga ayaa la guddoonsiiyey abaal-marinta xiddiga bishii January ee bilowgii sannadkan oo inkasta oo loogu dhawaaqay uu illaa hadda sugayay.
Goolhayaha reer Belgum ayaa hal gool oo kaliya laga dhaliyey kulamadii January ay kooxdiisu la ciyaartay Sevilla, Getafe iyo Valladolid.
Labadan abaal-marinood ee shaqsiga ah ayaa Thibaut Courtois iyo Karim Benzema la siiyey Khamiistii markii ay garoonka Alfredo Di Stefano ku qaadeen horyaalka LaLiga.
Dhinaca kale, Karim Benzema ayaa caawa ku dedaali doona inuu goolal dhaliyo kulanka ay kooxdiisu martida ugu noqonayso Alaves si uu usoo qabto Lionel Messi oo laba gool ka horreeya, isla markaana hoggaaminaya tartanka abaal-marinta Pichichi ee kabta dahabka ah.
Messi ayaa dhaliyey 23 gool oo midkii ugu dambeeyey uu ahaa laag xor ah oo aan ka badbaadin inay niyad-jab kaga baxaan garoonka kulankii ay Osasuna ku karbaashtay 2-1, halka uu Karim Benzema dhaliyey 21 gool oo ciyaartii ugu dambaysay ee Villarreal uu labadii ugu dambeeyey oo mid rikoodhe ahaa ugu soo dhowaaday laacibka reer Argentine.